विदेशीको उपचार गर्ने अस्पताल « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
विदेशीको उपचार गर्ने अस्पताल
२०७३, ७ भाद्र मंगलवार ०६:३९ मा प्रकाशित
डा. गिर्वाणराज तिमिल्सिना, मेडिकल डाइरेक्टर, एरा हस्पिटल प्रा.लि.
‘पढाइको सिलसिलामा मैले कोपेन हेगन डेनमार्क जस्ता देशमा आधा दशक बिताएँ । त्यहाँको युरोपियन स्तरका हस्पिटल कस्तो छ ? विदेशी लक्षित हस्पिटल कस्ता हुन्छन् ? जस्ता कुरामा बुझ्ने र जान्ने मौका पाएँ । सोही अनुसार मुलुकमा विदेशीको भरपर्दो उपचार गर्ने अत्याधुनिक हस्पिटल स्थापना गर्न सफल भएको छु ।’
– सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा विदेशी पर्यटकहरुलाई उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको त्यति पाइँदैन ।
– नेपालमा बिदेशीलाई मात्र लक्षित गरेर उपचार गर्ने अस्पताल त्यति छैनन् ।
– विदेशी पर्यटक लक्षित हस्पिटलका लागि महँगो लगानी होइन सेवा र सुविधा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्छ ।
पर्यटकका लागि खै अस्पताल ?
विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा सामान्य फूड पोइजनिङदेखि विभिन्न जटिल समस्याकोसमेत सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी विदेशी पर्यटकहरु कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्याको मारमा परेको अवस्थामा मुलुकमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा विदेशी पर्यटकहरुलाई उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको त्यति पाइँदैन । नेपालका ग्रान्डी, नर्भिक लगायतका अरु अस्पतालहरुले विदेशी पर्यटकहरुको उपचार गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएको भएपनि विदेशीका लागि मात्र भनी खोलिएका अस्पताल भने छैनन ।
मेडिकल इन्स्योरेन्सबाट खर्च
विदेशी पर्यटकहरुले सम्भावित स्वास्थ्य उपचारका लागि नगद बोकेर आएका हुँदैनन् । उनीहरुले प्राय मेडिकल
इन्स्योरेन्स गरेर आएका हुन्छन् । त्यही मेडिकल इन्स्योरेन्समार्फत उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको खर्च ब्यहोरिन्छ ।
एकातिर नेपालका अस्पतालहरुमा विदेशी पर्यटकहरुलाई कुन तरिकाले उपचार सेवा दिने भन्ने त्यति ज्ञान छैन भने अर्कोतिर उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था मिलाइएको पनि पाइँदैन ।
भरपर्दो सेवा र सुविधा
मुलुकमा विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यलाई केहीहदसम्म सहयोग पु¥याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । विदेशी पर्यटक लक्षित हस्पिटलका लागि महँगो लगानी चाँहिदैन । सेवा र सुविधा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्छ । यसैलाई लक्षित गरेर काठमाडौंको ठमेल क्षेत्र, सो¥ह«खुट्टेमा इरा हस्पिटल प्रा.लि.स्थापना गरिएको छ ।
विदेशी पर्यटकहरुको स्वास्थ्य सुविधाका लागि अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवाको जरुरत पर्छ उनीहरु हिँडिरहन चाँहदैनन । आफू बसेको होटलमा नै स्वास्थ्य सुविधा लिन चाहन्छन् । अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भएमा रोगको प्रकृति र बिरामीको अवस्था अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशी पर्यटकको उपचार गर्दा सबै विभागका चिकित्सकहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ । यसरी विदेशी पर्यटकले भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
पाँच तारेको जत्तिकै सुविधा
पर्यटकको उपचार गर्ने अस्पतालमा पाँच तारे होटेलको जत्तिकै सुविधाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सुविधासम्पन्न डिलक्स वेड, २४ सै घण्टा वाइफाई, एम्बुलेन्स, फार्मेसी सेवाको सुविधा छ ।
अस्पताल २५ वेडको भएपनि इमर्जेन्सी युनिट अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भएकाले धेरै विदेशी पर्यटकहरु उपचारका लागि आकर्षित भएका छन् ।
रोग निको हुँदै गएपछि विदेशीहरु एउटै वेडमा बसिरहन चाँहदैनन् । उनीहरु एक अर्कासँग कुरा गर्न चाहन्छन् । उनीहरुबीच एक आपसमा परिचय गर्ने, समय तालिका अनुसार औषधि खाने, चिया, कफी पिउनेलगायतका सुविधा खोज्छन् । यो सुविधालाई मध्यनजर गरी छुट्टै लवी बनाइएको छ ।
जब उपचारको सिलसिलामा विदेशी पर्यटकहरु यस हस्पिटलमा आउँछन् त्यसपछि बिरामीको रोगको आधारमा उनीहरुलाई भर्ना गरिन्छ । उक्त बिरामीको डाटामा उक्त बिरामीको कोड सबै व्यक्ति विवरणहरु इनपूट भएर फोल्डर बनेपछि उक्त बिरामीलाई कोड नम्बर दिइन्छ । त्यसपछि त्यस बिरामीको सबै विवरण उक्त कोड नम्बर राखेपछि सम्बन्धित चिकित्सकको कम्प्युटरमा मात्र हेर्न मिल्ने हुन्छ । यो डाटामा हरेक दिनका ल्याब रिपोर्टहरु अपडेट गरिएको हुन्छ । डाक्टरले गरेको प्रत्येक दिनको राउण्ड नोट अपडेट गरिन्छ । यसका साथै प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि अपडेट भइरहेको हुन्छ । यसबाट विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनि र उक्त बिरामीको फेमिली फिजिसियनले आफ्नो बिरामीको अवस्थाबारे आफ्नो देशबाट थाहा पाउँछ । यसका लागि उनीहरुलाई उक्त बिरामीको फाइल कोड नम्बर दिनुपर्छ ।
विदेशी पर्यटको उपचारको सिलसिलामा विगतको सम्पूर्ण स्वास्थ्य समस्या बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उक्त बिरामीको फेमिली फिजिसियनसँग पनि सम्पर्क गरी बिरामीको विगतको अवस्थाबारे सम्पूर्ण जानकारी र सल्लाह लिने गरिन्छ । यसले सम्बन्धित बिरामीको उपचारमा थप मद्धत पुग्छ र बिरामीको भरपर्दो उपचार हुन्छ ।
डा. गिर्वाण राज तिमिल्सिना फिजिसियन हुनुहुन्छ । उहाँमा सानैदेखि डाक्टर अध्ययन गर्ने सोच थियो । पोखराबाट
बिद्यालयस्तरीय अध्ययन पूरा गरेर सन् १९९८ मा विज्ञान विषयमा काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेशनल स्कूल अफ साइन्सबाट प्लस टू अध्ययन पूरा गर्नुभयो र सन् २००० मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभयो ।
डा. तिमल्सिना मध्यम वर्गीय परिवारको मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म पर्वत जिल्लाको देउपुर गाविसमा भएको हो ।
शुरुमा डाक्टर पढ्ने इच्छाबारे डा.तिमिल्सिनाले आफ्नो परिवारलाई बताउनुभएको थियो । परिवारले सहयोग गर्ने साहस दिएपछि उहाँको आत्मबल बढ्यो र सरकारी छात्रबृत्ति कुर्नुभएन । प्लस टू पास गरेसँगै काठमाडौं युनिभर्सिटीअन्तर्गत नेपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना हुनुभयो ।
डा. तिमिल्सिना नेपाल मेडिकल कलेजको तेस्रो ब्याचअन्तर्गत एमबीबीएस गरेको बिद्यार्थी हुनुहुन्छ । सन् २००६ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेर सो कलेजको अस्पतालमा एक वर्ष हाउस अफिसर भएर काम गर्नुभयो । २—३ वर्ष ह्याम्स हस्पिटलमा आईसियू, सिसियूमा काम गरेसँगै उहाँ आफ्नो पेशामा थप अनुभव बटुल्दै जानुभयो । त्यसपछि डा. तिमल्सिना विकसित युरोपियन देश डेनमार्कमा उच्च अध्ययन शुरु गर्न जानुभयो । शुरुमा उहाँ कार्डियालोजी विभागमा केन्द्रित भएर ३ वर्षजति काम गर्नुभयो । त्यसपछि विदेश बस्न हुँदैन । आफ्नो देश फर्किएर केही गर्नुपर्छ भन्ने पारिवारिक सल्लाह भयो र सन् २०१४ मा काठमाडौं फर्किनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालअन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा फिजिसियन भएर उहाँले काम गर्नुभयो । उहाँ त्यस सेन्टरमा सिसियू हेर्नुहुन्थ्यो । पछि उहाँलाई कम्युनिटीमा पनि जान लाग्यो । नेपालीहरुको पीडामा साथ दिन मन लाग्यो । त्यही बीचमा मुलुकमा ठूलो भूकम्प गयो । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले उहाँलाई मेडिकल को—अर्डिनेटरको जिम्मेवारी दियो । उहाँ यसमा विगत ६ महिनादेखि कार्यरत हुनहुन्छ ।
उपचारको आवश्यकता परेका बिरामीहरुलाई हामी जस्ता युवा डाक्टरको टीमले भरपर्दो अत्याधुनिक उपचार सेवा दिनुपर्ने उहाँको मान्यता छ ।
सन् १९६१ को त्यो डिसेम्वरलाई सम्झदा…
डा. दिनेशनाथ गोंगलले मुलुकमा पहिलोपटक मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्नुभएको हो त्यसैले उहाँ नेपालका फादर अफ न्यूरो